चिनियाँ सपनासँग चिली – eratokhabar
चिनियाँ सपनासँग चिली
ई-रातो खबर २०७४, २१ कात्तिक मंगलबार ०२:२९ November 7, 2017 1401 Views
(चीनका लागि चिलीका राजदूत लुइस स्मिड मोन्टेससँगको अन्तर्वार्ता)
चीनका लागि चिलीका राजदूत लुइस स्मिड मोन्टसले चालीसपटक भन्दा बढी चीनको भ्रमण गरिसकेका थिए । तर जब उनी चिलीको राजदूत भएर चीन पुगे तब पनि उनको आश्चर्यको सीमा सकिएको थिएन । महामहिम राजूतसँग हाम्रो अन्तर्वार्ता दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्धबाट सुरु हुन्छ । मेन्टेस सन् २००६ को अक्टोबर १ देखि व्यवहारमा आएको चीन–चिली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हुन् ।
चाइना टुडे : चीन र चिलीबीच स्वतन्त्र व्यापार सन्धि भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिका सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि केके हुन् ?
मोन्टेस : मलाई लाग्छ, यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर चिलीले राम्रो दूरदृष्टि देखाएको छ । चीनसँग हाम्रो व्यापार तामा, फलाम र अन्य धातुहरूमा केन्द्रित थियो । चिलीका व्यापार साझेदारहरूमध्ये चीन कुनै बेला २५ औँ वा २६ औँ क्रममा आउने गथ्र्यो । सन् २०१० मा चीन हाम्रो सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बन्यो । सन् २०१२ दुई देशबीचको व्यापार ३३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्यो । यो अझै पनि ऐतिहासिक रूपमा सबभन्दा ठूलो व्यापार हुनेछैन । तर चिलीको निर्यात १८ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ जसमा लगभग ६ अर्ब अमेरिकी डलर फाइदा भएको छ ।
जम्मा ६ वर्षको अन्तरालमा दुई देशवीचको व्यापार झन्डै चार गुणा (३.८५ गुणा) ले बढेको छ जब कि चीनमा निर्यात ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर १८ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो चिलीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । चिली अहिले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमध्ये चीनको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार देश बनेको छ ।
हाम्रा लागि यो परिवर्तनको अर्थ के हो ? चीनले आज जम्मा १ करोड ६५ लाख मात्र जनसङ्ख्या भएको सानो देश चिलीलाई चीनले विशेष प्राथमिकता साथ हेरेको छ । तर अभैm पनि धेरै चिलीका जनता चीनमा व्यापारको अवसर खोजिरहेका छन् वा चीनसँग सम्बन्धित काम गरिरहेका छन् । निःसन्देह यी सब परिवर्तनहरू चीन र चिलीबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र हाम्रो लामो समयको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको परिणाम हो ।
चाइना टुडे : सन् २०१२ को सप्टेम्बरमा चीन चिलीबीच लगानीका विषयमा पूरक सम्झौता भएको छ ? आपसी लगानीको सन्दर्भमा त्यो सम्झौताले केकस्तो प्रगति गरेको छ ?
मोन्टेस : चीन र चिलीबीचको स्वतन्त्र व्यापार सन्धिमा तीनवटा सम्झौताहरू गाँसिएका छन् : सन् २००६ मा हस्ताक्षर भएको वस्तु व्यापार सन्धि, सन् २०१० मा हस्ताक्षर भएको सेवा व्यापार सन्धि र त्यसपछि त्यो लगानीसँग सम्बन्धित सन्धि र दुवै पक्षका लागि सबभन्दा पछिको सन्धिले निकै महत्व राख्दछ । सन् २०१० अघि चीनमा चिलीको लगानी झन्डै २० करोड अमेरिकी डलर थियो भने चीनले सन् २००० देखि २०१० बीचको एक दशकमा चिलीमा ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी बढाएन । यसो हुनुका धेरै कारणहरू छन्, जस्तै हामीबीचको लामो दूरी, चिलीको सानो आकार भाषिक समस्या आदि ।
म चीनका लागि चिलीको राजदूतका रूपमा कार्यकाल समालेपछि मेरो एउटा पहिलो लक्ष्य चीनसँग सेवा व्यापारका विषयमा सम्झौता गर्नु थियो र म त्यो काममा सफल भएँ । यो विषयमा त्यसअघि भएका अन्य सम्बन्धहरूका कारण यो सफलता सम्भव भएको हो । तथापि लगानी सन्धिका सन्दर्भमा आठ चरणको वार्ता र १० वटा दूर सम्मेलनपछि केही प्रगति हासिल भएको हो ।
सौभाग्यवश सन् २०१२ मा आएर यो सन्धिले मूर्त रूप लियो र लगत्तै सकारात्मक परिणामहरू देखाउन थाल्यो । चीनमा चिलीको लगानी सन् २०१२ म झन्डै २८ करोड अमेरिकी डलर पुग्यो । अघिल्लो वर्ष सन् २०११ मा चीनमा चिलीको लगानी १५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर थियो । चिनियाँ पक्षबाट पनि यो गति तयत्ति नै वेगवन् छ । सन् २०१३ को पहिलो ३ महिनामा चीनका तर्पmबाट करार गरिएको प्रत्यक्ष लगानी १ अर्ब ३५ करोड अमेरिकी डलर नाघिसकेको थियो । यसले भीन संयुक्त राज्य अमेरकापछि चिलीका लागि दोस्रो सबभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीको स्रोत बन्न पुग्यो ।
चिनियाँ लगानीकर्ताहरू चिलीमा मात्र होइन, बरु सम्पूर्ण ल्याटिन अमेरिकामा आँखा लगाइरहेका छन् । तथापि उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने चिलीका केही विशेष विशेषताहरू छन्, जस्तै चुस्त शान्ति सुव्यवस्था, स्थिर अर्थतन्त्र, नियमसंगत सरकार परवर्तन र व्यवस्थित कानुनी बन्दोबस्त । यी कुराहरूले लगानीलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ । सन् २०१३ को पहिलो तीन महिनामा १ अर्ब ३५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको चिनियाँ लगानी चिली भित्रियो । विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका ३० वटा चिनियाँ कम्पनीमार्फत् त्यो लगानी भित्रिएको थियो ।
चिली खाना निर्यातमा नेतृत्वदायी देश हो । संसारमै चिली यस क्षेत्रमा चौधौँ क्रमसङ्ख्यामा आउने गरेको छ । फलपूmल निर्यातमा चिली प्रतिस्पर्धामा छ । वार्षिक ५ अर्बबराबरको फलफूल मात्र निर्यात गर्ने गरेको छ । त्यस्तै चिलीले वार्षिक ३ अर्ब अमेरिकी डलरको माछा निर्यात गर्ने गरेको छ । तथापि चीनले यो कुरालाई त्यत्ति ध्यान दिएको थिएन ।
तर अब कुरा परिवर्तन भइरहेको छ सीओएससीओ नामको कम्पनीले चिलीमा अङ्गुर लगाएको छ । त्यसको रक्सी फेरि चीनमा निर्यात गर्ने गरेको छ । लेनोभो कम्पनीले चिलीको कृषि क्षेत्रका लगानी गरिरहेको छ । उसले निलो एेंसेलु, पैयुँ र अङ्गुर खेतीमा लगानी गरेको छ र चीनमा निर्यात गर्ने गरेको छ ।
यसैबीच चिलीका व्यापारीहरू चीनमा आउँदैछन् । केहीले चीनमै संयुक्त लगानीमा अङ्गुर खेती थालेका छन् । चीन सरकारले यहाँ जग्गा खरिद गर्ने अधिकार नदिएको हुनाले उनीहरूको संयुक्त लगानी कम्पनी थालेका हन् । १४२१ नामको ब्रान्ड त्यस्तै एउटा उत्पादन हो ।
अरू केही व्यापारी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । एमई इलेक्टमेटल यसको उदाहरण हो । उनीहरूले खानी उद्योगमा प्रयोग गरिने ढुङ्गा फुटाउने औजारको उत्पादन गरिहेको छ । चीनलाई आवश्यक पर्ने आफ्ना उद्योगका लागि अपरिहार्य यस्ता वस्तुहरू चिलीमा उत्पादन हुने गरेको र चीनमा पठाइन्छ भने चीनमै किन उत्पादन नगर्ने ? यो उद्योग खोल्नुको तर्क यस्तो थियो ।
मेरो अनुमानमा सन् २०१२ मा चीनमा चिलीको लगानी झन्डै ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ जो चिनियाँ लगानीको तुलनामा त्यत्ति प्रभावशाली त छैन तर यसले एउटा बाटो लिइरहेको देखाएको छ । अहिलेको गतिमा अग्लिने छ । यो आगामी वर्ष अझ राम्रो हुँदै जानेछ ।
चाइना टुडे : स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले चीन र चिलीबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
मोन्टेस : चीनसँगको व्यापारमा फाइदा पाउन सकेकोमा चिली भाग्यमानी देश हो । सन् २०१२ मा चीनमा हाम्रो निर्यात १८ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर थियो भने चीनको निर्यात १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर थियो । यसबाट हामी सोझो रूपमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर नाफा पाएका छौँ । खाना आयातमा चीन अघि बढिरहेको सन्दर्भमा चिलीको फाइदा अझ बढ्ने पक्का छ । हाम्रा निर्यातहरूलाई प्रवेश अनुमति लिन त्यत्ति सजिलो भने छैन । म राजदूत भएर आएदेखि म व्यक्तिगत रूपमा यो काममा संलग्न छु र त्यसको समाधान भइसकेको छ । कृषि उत्पादनबारे चिली र चीनबीच बितेका १५ वर्षमा नभएका सम्झौताहरू पछिल्ला तीन वर्षमा भएका छन् । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुनुअघि चीनमा चिलीका दानाको निर्यात मात्र १ देखि २ प्रतिशत मात्र थियो तर अहिले यो प्रतिशत झन्डै १२ पुगेको छ ।
चीनमा चिलीका खाद्य पदार्थको निर्यातअन्तर्गत फलफूल, वाइन, माछा, सुँगुरको मासु र अरू धेरै कुरा पर्छन् । सन् २०१२ मा यसको मूल्य २ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरबरबबर थियो । सुँगुरको मासुको मागमा आएको तीव्रतासँगै सन् २०१३ मा हाम्रो खाद्य पदार्थको व्यापार २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरदेखि ३ अर्बसम्म पुग्न सक्नेछ । चीनमा निर्यात व्यापार यसले १८ प्रतिशतले बढाउनेछ भने चिलीको नाफा भने उत्तिकै रहनेछ ।
चाइना टुडे : निर्यात विविधिकरणमा के चिली सफल भएको छ ?
मोन्टेस : स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताभन्दा अघि चीनमा निर्यात गर्ने ९८ प्रतिशत सामानहरू मूलतः धातुजन्य सामानहरू हुने गर्थे । जस्तै तामा, फाम, मोलिबेडिनम, चाँदी र सुन । त्यस अतिरिक्त तरकारी तथा माछाका उत्पादनहरू थिए । तर गएको वर्ष चिलीले चीनमा यी तीन प्रकारका अतिरिक्त ५१० अन्य प्रकारका वस्तुहरू आयात गरेको छ । खाद्य सामग्री पहिले निर्यातको प्रकार हो । चिली ठूलो खाद्य वस्तुके निर्यातकर्ता हो भने चीनमा त्यसको ठूलो माग छ । हामी एक अर्काको आवश्यकता पूर्ति गर्न सहकार्य गरिरहेको छौँ ।
म सन् १९९२ मा पहिलो पटक चीन आएको थिएँ । त्तिबेला यहाँ धेरै मासिहरूलाई अङ्गुरको वाइनको विषयम थाहा थिएन । आजभोलि धेरै मानिसहरूलाई अङ्गुरको वाइनको विषयमा थाहा थिएन । आजभोलि चिलीले वार्षिक १६ करोड अमेरिकी डलर वराबरको अङ्गुरको वाइन निर्यात गरिरहेको छ । कुनै समय चिनियाँ जनता हाम्रो फलफूल महँगो भएको सोच्थे । तर आजभोलि चिनियाँ जनता वार्षिक ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको चिलीका फलफूल खरिद गर्छन् । चिली संसारकै सबभन्दा ठूलो माछाजन्य सामग्रीको उत्पादक तथा निर्यातकर्ता हो ।
मैले चीनका स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई चिली निलो एंसेलुको सबभन ठूलो निर्यातकर्ता भएको बताउँदा उहाँहरू पत्याउनुभएन । उहाँहरूले संरा।अमेरिका भएको दाबी गर्नुभयो । हो, उत्पादनको हिसाबले संरा.अमेरिका ठूलो उत्पादक हो । तर त्यहाँ उत्पादन हुने अधिकांश भाग आन्तरिक उपभोगमा प्रयोग हुने गरेको छ । चीनमा ताजा निलो एंसेलु निर्यात गरिरहेको एउटै देश चिली हो । सन् २०१२ मा हामीले १८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको पैयूँ चीनमा निर्यात गर्‍यौँ । वसन्त उत्सवको समयम चिनियाँ बजारमा पाइएकाे ताजा पैयुँको ठूलो हिस्सा चिलीबाट आएको थियो । चिली नै मात्र एउटै त्यस्तो देश हो जसले वर्षको त्यो समयमा चीनमा तजा फलफूल आपूर्ति गर्न सक्तछ ।
चाइना टुडे : स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतले दुई पक्षीय व्यापा सम्बन्धलाई फराकिलो पार्न अरू कुनै क्षेत्रहरूमा अवसरका बाटाहरू फराकिलो बनाएको छ कि ?
मोन्टेस : निश्चय पनि छ । धेरै छन् यो सम्झौताले व्यापार र लगानीका दुई बाटाहरूलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । ती मध्ये पनि दोस्रो पक्षले दुवै देशको लागि भविष्यमा सुरक्षित स्थान सुनिश्चित गरेको छ । तर अझ पनि एउटा क्षेत्र बाँकी छ जसलाई उपेक्षा गरिएको छ । वस्तुको मात्र व्यापार हुने गर्दैन । बरु सेवा क्षेत्रको नि व्यापार हुन जरुरी छ । सबै प्रकारका सेवाहरू । संसार कम विकसित भएको समयमा वस्तुके व्यापार हावी थियो । अर्थतन्त्रको विकाससँगै बौद्धिक शक्ति महत्वपूर्ण थालेको छ । सेवा क्षेत्रको व्यापरले प्रमुख भूमिका खेल्न थाल्यो । चीन र चिलीबीच सेवा क्षेत्रको व्यापारको उज्यालो भविष्य छ ।
चाइना टुडे : महामहिमज्यू, सन् १९९० को दशकमा तपाईले पहिलो पटक चीनको भ्रमण गर्नुभयो । चिनियाँ सपनाबारे तपाईको बुझाई के हो ?
मोन्टेस : चिनियाँ सपनाको अवधारणाको विकास राष्ट्रपति सि जिनपिङले अघि सार्नुभएको हो । मेरो बुझाईमा यसले जीवनका सबै पक्षहरूका जनभावनाको सम्मिश्रणको प्रतिनिधित्व गरेको छ । गवएको सप्ताहन्तमा मैले ग्युलिनका माझीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ, मैले ऊरुम्चीमा भेंलागोठालाहरू भेटेको थिएँ, सानतोङका किसानहरूले बनाएको बगैँचा र फलपूmलको वाइन उत्पानलेमलाई प्रभावित बनाएको छ, साथै साङ्घाईका मजजदुरहरूले गाडी र मोवाइल फोनहरू उत्पादन गदैृछन्, ती सबै जनताको भावना हो चिनियाँ सपना । उनीहरू सबैको एउटै चाहना छ– चीनलाई अझै माथि थप विकसित देश बनाउने र त्यहाँका जनताको जीवन अझ राम्रो बनाउने ।
चिनियाँ सपना विश्वको सपना हो । चीन अज संसारकै दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति हो र पलिो आर्थिक शक्ति बन्ने क्रममा छ । चीनको राम्रो हुनु चिलीको पनि राम्रो हुनुसँग जोडिएाके छ यदि चीनले आफ्नो सपना अरू देशहरूसँग पनि साटे संसार अझ सुन्दर स्थान बन्नेछ ।
(यो अन्तर्वार्ता पेड्रो लागो र वाङ्ग याङ्ग लिएका हुन् ।)
Chile Shares the Chinese Dream
Vol.63, No.1, January 2014
२०७४ कात्तिक २१ गते विहान ८ः१० मा प्रकाशित
पूर्व उपप्रधानमन्त्री शेरचनमाथि आक्रमण
दाङका सबै उम्मेदवारका घरमा कालो झण्डा